I-Leanplum: Uvavanyo lwe-A / B kuMxholo wakho weFowuni kunye neMiyalezo | Martech Zone
Ukuphuhlisa kunye nokuhambisa usetyenziso lweselfowuni kunokuba yinkqubo edinisayo, echitha izixhobo kunye nexhalabisayo kwiinkampani. Ukufumana nje imvume kwiVenkile yeApple ngamanye amaxesha kunokuba sisiqabu, ungaze ucinge ngokulungiselela usetyenziso lwakho lweselfowuni. Kwaye ukuba ufumanisa ukuba kukho amathuba okuphucula okanye ukwenza i-app ibe yeyakho, oko kuthetha ukuba uphuhliso olongezelelweyo kunye nokukhutshwa okutsha. Kukho ezinye iindlela ezikhoyo phaya, nangona.
Leanplum sisisombululo esidityaniswe ngokupheleleyo sokwenza usetyenziso lweselfowuni ukunceda iinkampani ekuthumeleni usetyenziso lweselfowuni apho zinokuvavanya khona, zihlalutye, zicwangcise kwaye zilungiselele amava omsebenzisi kunye nemiyalezo.
Leanplum Iqonga livumela ubuNtu, ukuVavanya kunye nokuSebenzisa
Isoftware yovavanyo lwe-A / B -Uvavanyo lomxholo, imikhankaso yemiyalezo, izinto ezibonakalayo, kunye ne-UI kubhabho ukulungiselela ukuphucula amava omsebenzisi ozihambileyo ngovavanyo lwexesha lokwenyani olungafunisi kungeniswa kwakhona kweVenkile yeVenkile. Umsebenzisi unokufaka uvavanyo kumacandelo abathengi kunye nokujolisa kuvavanyo lwe-A / B ngokusekwe kwijografi, uhlobo lwesixhobo, ingxelo yohlelo lokusebenza, umthombo wezithuthi, iimpawu zabathengi, umdla, ukhetho kunye nokuziphatha ngaphakathi nohlelo.
Ulawulo lokuqukethwe kweMfono Yenza umntu kwaye upapashe umxholo oshukumayo ngokusekwe kukuziphatha, inani labantu, indawo kunye nolunye uphawu. Vumelanisa, gcina, kwaye usebenzise iiasethi zeselfowuni ngexesha langempela, ngokhuseleko oludibeneyo, ukuvumelanisa kunye nenkxaso engaxhunyiwe kwi-intanethi. Khupha amanqaku amatsha ngaphandle kwesidingo sokungeniswa kwakhona kwiVenkile yeapp kunye nethala leencwadi elihlanganisiweyo. Oku kubandakanya i-API yemodeli yedatha eguqukayo.
UkuThengisa okuZenzekelayo Yenza, wenze ngokuzenzekelayo, kwaye uvavanye imiyalezo ekujolise kuyo kwiselfowuni kunye notyhilo lwezaziso ukulungiselela ukubandakanyeka komsebenzisi, ukugcinwa kunye nokunyaniseka kwempawu. Kunye novavanyo lwe-A / B lokuthumela imiyalezo, ungahlaziya umyalezo kunye nokwazisa amaphulo ngexesha langempela, okanye wenze ixesha elithile- kunye nemicimbi esekwe kumsitho.
Uhlalutyo losetyenziso lweSelfowni -Uhlalutya idatha esekwe kukuziphatha kwangaphambili, uhlobo lwesixhobo, ijografi, umthombo wezithuthi, kunye neempawu zomsebenzisi zesiko. Yenza iifaneli zokuguqula, icandelo elisekwe ekuziphatheni okanye ixesha, kwaye ujonge iimetriki eziqhelekileyo.
tags: itsplumusetyenziso lweselfowuni uvavanyoUhlalutyo losetyenziso lweselfowuniIifowuni zohlalutyo losetyenziso lweselfowuniIsoftware yohlalutyo lokuziphathaImikhankaso yeapp mobileusetyenziso lomxholo wesoftwareumxholo wesoftware onamandlaUjoliso lweapps ekujolise kuyousetyenziso lokuthengisa oluzenzekelayoImiyalezo yefowuni yeselfowuniii-metric zeapps zeselfowuniUkusebenza kwefowuniusetyenziso lweselfowuni olwenzelwe wenausetyenziso lweselfowuni kuvavanyo lwexesha langempelaUkuhanjiswa kwakhona kwesoftwareulwahlulo lokusebenza lweselfowuniUkujoliswa kweapp mobileukuvavanywa kwesoftwareusetyenziso lweselfowuni lwenze imiyalezouvavanyo mobile